NgoJuni, 2017 ArcGIS-ESRI, Ukufundisa i-CAD / GIS, Okufumaneka, Geospatial - GIS
Olu luxwebhu olucebisayo olufumaneka ngeSpanish, olunomxholo obaluleke kakhulu, ngokwembali nangokobuchwephesha, ngokubhekisele kulawulo lwemifanekiso kuqeqesho olunxulumene nesayensi yomhlaba kunye neenkqubo zolwazi lwendawo. Uninzi lomxholo unee-hyperlink kumaphepha apho kukho umxholo wokudibana.
Injongo yale ncwadi kukubonisa abaqeqeshi be-GIS, abaphuhlisi besicelo, abayili bewebhu, okanye nangaluphi na olunye uhlobo lwetekhnoloji, indlela yokuba ngumfanekiso kunye ne-GIS ace. Okanye, ngamanye amagama, ungaba njani ngumntu onobuchule ngakumbi, okrelekrele kunye nomsebenzisi osebenzayo wedatha yomfanekiso kwi-GIS. Ngokukhawuleza, imifanekiso ibaluleke kakhulu kwaye abo bayaziyo indlela yokuzijonga, bazihlalutye kwaye baqonde eyona ntsingiselo yabo baya kuba ziingcali kwimfuno ephezulu kwiminyaka ezayo.
Baninzi abaphulaphuli abanokubakho kule ncwadi. Eyokuqala yi-GIS yobungcali kunye nemephu yoluntu, abantu abasebenza ngeemephu kunye nedatha ye-geospatial mihla le, ngakumbi abo bafuna ukufumana ngakumbi kwimifanekiso kwizicelo zabo ze-GIS. Ukuba uyisazinzulu ngedatha, umzobi weemephu, umsebenzi wearhente karhulumente, umcwangcisi wedolophu, okanye enye ingcali yeGIS, usenokuba sele usebenzisa iWebhu kwaye unikezela ngolwazi lwendawo kuluntu.
Ngokuqinisekileyo sele ulazi ngokwendalo ixabiso lemifanekiso njengemifanekiso yetekhnoloji yokumangalisa yedatha edityaniswa kakuhle nedatha yevector geospatial.
Abanye abaphulaphuli benziwe ngabasebenzisi abatsha be-GIS abafuna ukwazi ukuba kunokwenziwa ntoni na ngemifanekiso: abantu abanjengabaqhubi beedrone abaqhubi beenqwelo moya abenza uhambo lokubhabha kwimephu yeekhampasi zezikolo, abacwangcisi basezidolophini abacwangcisa iiprojekthi zophuhliso, okanye oososayensi kunye neebhlog. ingxelo malunga notshintsho lwemozulu kwaye beze kwi-GIS ngenxa yomdla wabo kwimifanekiso.
Okokugqibela, le ncwadi iza kuba nomdla kubantu abonwabileyo kukuhlola umhlaba kunye nokubona imifanekiso enomdla yoMhlaba. Kwezi "armchair" zejografi kunye nezinye, le ncwadi kunye nenguqulelo yayo ye-elektroniki, efumaneka kwiTheArcGISImageryBook.com, inikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokuzibandakanya kwaye kwezinye iimeko eziphazamisayo, kunye nokunxibelelana nomfanekiso onamandla kunye nokusetyenziswa kwemephu yewebhu babalisa amabali anomdla ngomhlaba wethu. Imfuno ekuphela kwayo yokonwabela le ncwadi kukufuna ukwazi ngcono umhlaba ngemifanekiso kunye nomfanekiso wecartographic kunye nokuzimisela ukusebenza.
Le ncwadi, ukongeza ekufundweni, ibandakanya indawo ebonakalayo ekufuneka ikhompyuter yakho kuphela
ngokufikelela kwiwebhu. Ubumnandi buqala xa umntu ebandakanyeka kwinkqubo ngokuvula amakhonkco,
ukuphonononga iimephu kunye nokusetyenziswa okwenziwe ngabanye abasebenzisi, kunye nokugqiba izifundo ukwenza eyakho
iimephu zakho kunye nokusetyenziswa. Ezi zixhobo (ngaphezulu kwemephu ezingama-200, usetyenziso, iividiyo kunye nemifanekiso iyonke)
Le ncwadi imalunga nokufaka imifanekiso kwiArcGIS, iqonga lewebhu le-GIS, kwaye yeyesibini kwifayile ye-
Uthotho lwezihloko zeIdea enkulu. Ukuba uqala nje kwi-GIS, kunokukunceda ukufunda incwadi yokuqala kuthotho, Incwadi yeArcGIS: I-10 yeengcinga eziGcweleyo zokuSebenzisa iJografi kwiLizwe eliSingqongileyo. Nangona lo mqulu uyilelwe njengomsebenzi wokuma wedwa, abafundi abaninzi baya kuyifumana incwadi yokuqala inomdla nayo.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ulawulo lomhlaba luza kuba njani kwixesha elizayo? Umbono weCadastre 2034
Post Next Thelekisa iinguqu eziye zenzeke njenge fayile CADOkulandelayo »